ဘုန်းကျော်: Oct 12, 2010
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့အနေအထားကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။ အတွေးပေါင်းများစွာ ကိုယ်စီရှိကြမှာပါလေ။
ချစ်ကြည်ရေးခရီးတော့မဟုတ်ပါ။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် သွားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေက သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် လက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းက အပေါ်စီးကနေ နေရတဲ့ဘ၀ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေပါရောလား။ သြော်...။
ဒိန်းမတ်သံရုံးက ပိုက်ဆံမပေးဘူးလို့ပြောတော့မှ ဒိန်းမတ်သံရုံးက ရိုင်းတယ်၊ ဒီပလိုမတ်မပီသဘူး၊ Communication မှာ professional မဖြစ်ဘူးဘာညာကြားရတော့..ဒီလိုမျိုးတွေးမိလို့ပါ။ ဒိန်းမတ်အစိုးရကပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာအသံမှမကြားရ။ ဘာဖြစ်လို့အခုကြမှ အသံကြားရပါလဲဟင်..။ မပေးတော့ စိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်။
Danish embassy's letter to Irrawaddy is rude and undiplomatic. So editors and senior management here want the embassy to say sorry and apology.
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက မကြိုက်လို့ပိုက်ဆံမပေးတာလားဟင်။ ဧရာဝတီအယ်ဒီတာရဲ့ ပေါ်လစီကို သဘောမကြလို့လားဟင်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာမှ ဒီကိစ္စဖြစ်ရတယ်လို့ ဆင်ခြေပေးတာလားဟင်။ ကိုယ့်အမှားလည်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါအုံး...ဆရာတို့ရေ..။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး ဗြောင်တော့....မလိမ့်ကြပါနဲ့။ ဒီမိုကရက်တစ်လှုပ်ရှားမှုမှာ ဧရာဝတီရဲ့ အခန်းက သေးသေးလေးလေးပါဗျာ။ ဒါကိုတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်လည်း စွတ်ပြီး အထင်တွေမကြီးကြပါနဲ့..။ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာမရှိလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ရှိတော့ သတင်းပိုစည်ကားတာပေါ့။ ဒီလောက်ပါပဲ။
ဗမာပြည်၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ မြောက်ကိုရီးယား အစရှိတဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်မီဒီယာတွေက စီးပွားရေးလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အလှူရှင်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကိုပဲ တချိန်လုံးမျှော်လင့်နေရတယ်ပေ့ါနော်..။ ဇင်ဘာဘွေပြည်သူတွေ၊ မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေ သုံးလေးသန်းလောက် ထိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အခြေအနေနဲ့ ကျနော်တို့အခြေအနေမတူကြပါဘူးဗျာ..။ တကယ်လုပ်ချင်ရင် တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုနာဆီကငွေက ပါးစပ်နဲ့လက်ပဲရင်းရတာဆိုတော့ မပင်ပန်းဘူးပေါ့။ ခေါင်းမစားဘူးပေါ့ဗျာ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဘိုလိုမရေးပဲနဲ့ ဗမာလိုရေးပြီး ဧရာဝတီမှာ တင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကွန်းမက်တွေကိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွင့်ထားကြည့်ပေါ့။ ဒါမှ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို အထင်သားတွေ့ရပါလိ့မ်မယ်။ မီဒီယာပဲဗျာ။ ပွင့်လင်းရမှာပေ့ါ။ အခုကြတော့ ဧရာဝတီရဲ့ လုပ်ပုံက ဘိုလိုပဲ ရေးတက်ဖတ်တက်တဲ့လူတွေကိုပဲ လူထင်နေလားမသိတော့ပါဘူး။
၆၂-ယောက်တောင်ရှိတဲ့အင်အားက တစ်ရက်ကို သတင်းခြောက်ပုဒ်လောက်နဲ့ပဲ ရပ်နေတော့ ဒိန်းမတ်လည်းတင်းပြီပေါ့ဗျာ။ သြော်..ဒို့ဗမာတွေ လက်ကြောမတင်းလိုက်ပုံများ..။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, October 12, 2010